UYIJIKA NJANI IGARAJI UKUBA IBE NGUMQOLOMBA WOMNTU - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Uyijika njani iGaraji ukuba ibe nguMqolomba woMntu
Uyijika njani iGaraji ukuba ibe nguMqolomba woMntu
Nantsi indlela yethu yokuguqula igaraji ibe sisikhokelo soyilo lomqolomba wendoda kubandakanya ukutyibilika, ukukhanya, ubume bodonga, ishelfu, ukugcinwa, ifanitshala kunye nokuhonjiswa. Ke ujonge iindawo zomqolomba wendoda yakho, kwaye uthathe isigqibo kwigaraji. Kukhethwe kakuhle, kuba eyona nto inzima kwaye ibiza kakhulu yokwakha sele yenziwe - ukwakha iindonga ezine, uphahla kunye nomgangatho.
Ngezo bhloko zokwakha zisisiseko, ungenza olunye uhlengahlengiso kwisithuba kwaye uqale ukonwabela ubusuku be-poker kunye nabahlobo bakho ngokukhawuleza. Ngethuba nje ungeyonyusi ukunyathela kwegaraji yakho kwaye wonke umsebenzi ungaphakathi, akufuneki ufune imvume yocwangciso.
Ukuba uhlala kumbutho wezindlu okanye isakhiwo esidwelisiweyo unokufuna ukubonisana nekomiti yocwangciso yendawo.
Ukuguqula igaraji yakho ibe yindawo yokuhlala ngaphandle kogunyaziso kunokubangela iingxaki ezantsi kwendlela ukuba ufuna ukurenta okanye ukuthengisa, ke thatha ixesha lokulandela inkqubo efanelekileyo. Jonga igalari yethu epheleleyo yeengcinga zomqolomba womntu apha.
imibono yezipho zeqela le-bachelorette
Umgangatho womntu weGaraji lomgangatho
Ukukhanya kweGaraji loMntu
Yenza iiNdonga kwiGaraji
Umqolomba woMntu woMgcini kunye nokuGcina
Ifanitshala yeGaraji loMntu
Ukuhonjiswa kweGaraji loMntu
Yintoni omele ukuyiphepha kwigaraji yomqolomba wendoda
Unokukhetha izinto ezimbini zokugcoba ioyile, engagqitywanga kumgangatho wegaraji lekhonkrithi. Ungayicofa kwaye uyongeze ukugqiba, okanye uyigubungele. Nokuba ukhetha ntoni, amandla okuhlamba umgangatho linyathelo lokuqala.
Esona sisombululo sikhawulezayo somgangatho wokubeka iithayile zerabha ezidibeneyo. Zonwabile phantsi kweenyawo, kwaye kulula ukuzifumana, ukucoceka, okanye ukubuyisela endaweni njengoko kufanelekile.
Iikhaphethi zinokukunceda ufezekise imvakalelo yokwahlula phakathi kwendawo yegaraji kunye nendawo yokuhlala .. Ukubeka ikhaphethi yokugoba kunye nodonga ukuya eludongeni kuya kuphelisa isandi, kugcine ubushushu buzinzile, kwaye kube lula ngakumbi phantsi kweenyawo kunekhonkrithi engenanto.
Ukuba ufuna ukulungiswa okuphuculweyo kunye nokusisigxina, unokubeka kwakhona kwisigcini esingaphantsi. Oko kukunika inketho yokubeka phantsi iiplanga okanye udibanise ndawonye iiplanga zebhodi.
Indawo enkulu yombhoxo ayisebenzi kakhulu kwaye isebenza kakuhle, kodwa cinga ukutywina kunye nokugqiba ikhonkrithi kuqala.
Ukuba awenzi enye into kumgangatho wegaraji yakho, jonga umaleko wamatye epoxy. Oku kuya kukufihla ukungafezeki kunye nokuphucula ukubonakala komgangatho okhoyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo, inokugqitywa ngumntu ongahlawulwayo kwimpelaveki enye. Ungabona ngaphezulu umqolomba womntu iinketho apha.
Iigaraji ezininzi azinazo iifestile, kwaye zikhanyiswe ziibhalbhu ezingenanto, zibanika indawo engathandekiyo, igumbi lokuncinwa. Ukutshintsha ukukhanya yenye yeendlela ezilula ukuguqula ukuziva kwesithuba ukusuka 'kwindawo yokugcina' ukuya 'kwindawo yokuxhoma'.
Zintathu iindidi zezibane ekufuneka ucinge ngazo; ukukhanya okukufutshane, ukugcwalisa okanye ukukhanyisa umsebenzi, kunye nokukhanya okukhanyayo.
Qala ngokudibanisa ukukhanya kwibhalbhu ephezulu. Ukukhanya kwesilayidi okungaguquguqukiyo okuhamba ngesiqingatha kwisitayile segubu kuya kuphakamisa okona kukhanya kukubi ngelixa uthatha eyona ndlu incinci.
Ukuba unokukhetha, zama ukufaka esi sixhobo kufutshane nomqolo wegaraji, kude nomnyango, apho kumnyama khona. Ukugcwalisa nakweyiphi ikona emnyama kwaye wenze igumbi live likhulu, yongeza izibane zomgangatho wetorchiere.
Okulandelayo, yongeza ukukhanya kwemisebenzi. Ukuba ukongeza ibha emanzi, uya kufuna ukukhanya okuxhonywe eludongeni kukhanye kwindawo yokusebenza. Kwitafile ye-poker, ukuxhoma isibane esijinga ngaphezulu kuya kuqinisekisa ukuba wonke umntu unokubona amakhadi abo.
Ukuphosa idyasi yepeyinti kuya kuyiphucula imbonakalo yomqolomba wendoda yakho, kodwa ukuthatha izinto kwinqanaba elilandelayo, cinga ukongeza ubume.
Isitena okanye ilitye veneer kulula ukuyifaka kwaye iya kunika umbono wokuqina kunye nokuqina.
Iphepha lodonga eliqingqiweyo ngombala omnyama longeza ukuntywila kwangoko kulo naliphi na igumbi. Unokusebenzisa iplanga okanye iplanga ukuze ufezekise indawo yokulala. Jonga inqaku lethu malunga imibono yomqolomba womntu ukuphefumlelwa okungakumbi.
Owona mqobo uphambili wokuphumla kwigaraji yakho kukuxinana. Ukuba akukho enye into, thenga ngexabiso eliphantsi yokugcina igaraji ezinje ngesefu yocingo, zifafaze, kwaye ufumane yonke into phantsi.
Uya kumangaliswa yindlela eguqula ngayo indawo ukusuka 'kwindawo yokugcina' ukuya 'kwindawo yokuhlala'. Ukuba awunayo itoni yokuxinana, iishelufa ezivulwe kakuhle zivumeleke ngokugqibeleleyo.
Unokuthenga kwakhona indawo yokugcina ezizimeleyo kwaye uyisebenzise njengokwahlulahlula okwenziweyo. Uthotho lweekhabhathi ezinkulu okanye iimpahla zokunxiba zikunika indawo eninzi yokufihla kude izixhobo zakho kunye nezinto zegadi.
Kangangoko kunokwenzeka ngokusekwe kwisithuba sakho nakwiimeko, zama ukususa naziphi na izikhumbuzo ezibonakalayo zokuba usegaraji.
Ukongeza udonga lokwahlula nakuphi na ukuphakama kuyindlela elungileyo yokubeka umqolomba kwindawo yakho yegaraji. Iindonga zeAccordion kunye nokwahlula amagumbi kunokuthengwa kwaye kufakelwe ngobunzima obuncinci.
Isisombululo esisigxina, yakha isakhelo samaplanga. Ngaphambi kokuba uyigubungele ngodonga olomileyo, faka ubushushu ukuze uncede ukulawula iqondo lobushushu.
Olunye ukhetho kwiindonga zokwahlulahlula ibloko. Ukuba ukhululekile ukusebenza ngekhonkrithi kwaye unokufikelela kwiibhloko ze-cinder ezifikelelekayo, esi sisisombululo esifanelekileyo, ngakumbi kwimozulu eshushu.
Ukuba ufumana imozulu ebandayo apho uhlala khona, unokuzisola ngokudlulisa eli thuba lokufaka indawo yakho.
Xa kufika ixesha lokubonelela indoda yakho umqolomba, yenza imantra yakho 'yokuhlala kunye nomphezulu'. Ngaba uceba ukonwabisa emqolombeni indoda yakho?
Uzakufuna indawo yokuhlala enegumbi eloneleyo kubo bonke abahlobo bakho. Isofa kunye nezitulo ezimbalwa kufuneka ziyenze-amanqaku ebhonasi okubandakanya i-recliner yeplush.
Amathuba ukuba ucwangcise ukonwabela isiselo kwindawo yakho yokuphumla engcwele. Nokuba uhlala phi emqolombeni womntu wakho, kufanele kubekho umphezulu ngaphakathi kwengalo apho unokuphumla khona isiselo sakho.
Oku kuya kuthintela neendwendwe zakho ekubekeni iziselo zazo phantsi, apho zinokukhaba khona zize zonakalise ikhaphethi oyibekileyo.
Ukuba awunayo indawo eyaneleyo yegumbi lokuhlala, cinga ngetafile ye-poker endaweni yoko. Ngezitulo ezitofotofo, ezingapholiyo, unokungaphoswa sisingqengqelo konke konke.
Kuxhomekeke kubume beam kuphahla lwakho lwegaraji, unokufaka isitulo sokujinga okanye hammock. Bona Okuninzi Izimvo zegumbi lokuhlala Apha.
Ukuba uneememorabilia ezingqubanayo noyilo lwangaphakathi lwendlu ephambili, umqolomba wendoda yindawo efanelekileyo yokuyibonisa ngekratshi.
Eli gumbi kufuneka likwenze uzive wonwabile kwaye ukhululekile, ke khetha izinto zokufakwa ngokusekwe kuloo ndlela. Ukwenza iipowusta ngaphambi kokuba uzixhome kuya kwenza indawo izive isisigxina kwaye igqityiwe.
Ukuba uza kuthenga izinto zokuhombisa okanye ukupeyinta, khetha umbala omnye ophambili kwisithuba kunye nombala omnye okanye emibini yentsingiselo. Zama ukuqinisekisa ukuba ubuncinci omnye wale mibala ukhona kuyo nayiphi na into yoyilo oyongeza kwisithuba.
Ukuba ukongeza ishelfu yocingo, bamba itoti yokupeyinta ngombala wombala wakho kwaye uyenze ngenjongo.
Ukuthenga isingqengqelo esitsha okanye ukupeyinta iindonga? Kulapho kufanele kusetyenziswe umbala wakho ophambili. Ngaba ufuna i-cushions eyongezelelweyo esofeni? Jonga ngokusondeleyo imibala kwipateni- nkqu neenkcukacha ezincinci zinokunceda ukubopha umhombiso kunye.
Ungayibona ngeso lengqondo igaraji lakho lomqolomba ngokulula usebenzisa enye ye Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo ezikhoyo ngoku kwintengiso. Oku kwenza ukuba umntu azame izinto zethu ezahlukeneyo ezinjengomgangatho, ipeyinti eludongeni, ishelfu kunye nokuhombisa ukufumana uyilo oluthandayo ngaphambi kokuthenga nantoni na.
Amanqaku ambalwa obuchwephesha: Uya kufuna ukusebenzisa ipeyinti ethintela ukufuma, kuba igaraji ayinayo eyona moya ihamba phambili. Cinga ukuqhuba i-dehumidifier xa isimo sezulu soggy-ufuna ukuba umntu wakho umqolomba ucoceke kwaye wome.
Ngobuncinane obungenanto, susa nayiphi na imichiza enetyhefu okanye eyingozi kwisithuba. Ukuchitheka okanye ukuvuza kunokuba yingozi.
Ungaze utshaye ngaphakathi emqolombeni womntu ngaphandle kokuba kususwe onke amafutha kwaye akukho moto ikhoyo. Ukuba ufuna ukosa, kuyakufuneka uvule umnyango kwaye uphumele ngaphandle - cinga ukongeza isisitho somqala okanye olunye ukhuselo ukuze ungabikho kwimozulu.
Ungaze usebenzise ipropane, iparafini, ibutane, okanye amalahle ngaphakathi, nokuba ucango luvulekile. Iigesi eziyityhefu zinokwakha zize zibe yingozi okanye zibulale. Kungcono ukomeleza izinto kunegumbi likaxakeka.
Bona Okuninzi Izimvo zokwenza igaraji kweli phepha.
Umcwangcisi womtshato wasimahla ngeposi
Iikhabhathi zekhitshi zomthi ezixinzezelekileyo
igumbi lokulala eliluhlaza namhlophe
I-avareji yeendleko zotywala emtshatweni we-150
Umama wezipho zomyeni